Somali_Welcome to Kindergarten
Waa waqtigii la isku qori lahaa Kindergartenka!
Cunugaagu 5 sanno jir ma gaaray Agoosto 31keeda ama kahor? Haddii ay sida tahay, hadda waa waqtigii aad ku qori lahayd Kindergartenka! Kindergartenku waa bilaash iyo qeyb muhiima oo ka tirsan ku guuleysiga cunugaaga iskuulkiisa iyo nolosha. Kindergartenku waxa uu bilaabmaya xagaaga dhammaadkiisa ama horraanta dayrta, taas oo hadba ku xidhan degmo dugsiyeedkaaga, laakiin waxaa muhiim ah in aad naftaada siiso waqti si aad u hesho waqti aad su’aalo ku weydiiso oo aad ku hesho gargaarka waraaqaha.
Si looga taageero ilmahaaga kalaguurka u gudbidda Kindergarten, toddobada degmo dugsiyeed ee ay ka kooban tahay Qariirada Waddooyinka gobolka (Auburn, Federal Way, Highline, Kent, Renton, Seattle iyo Tukwila) ayaa isku yimid si ay u sameeyaan taariikhda Diiwaangelinta Kindergartenka caadiga ah – sanadkan maalintaas waa Janaayo 16, 2018. Taas macnaheedu waxa weeye, in biloowga Janaayo 16 aad la xiriiri karto xafiiska dugsiga ama degmada ee Qariirada Wadooyinka gobolka si aad u biloowdo howsha isdiiwaangelinta. Degmooyin iyo dugsiyo badan ayaa sido kale qabta xafladaha isdiiwaangelinta jiilaalka iyo gu’ga.
Webside-kan waxaad ka heli doontaa manafacaad ka caawin kara bilaabida howsha iska diiwaangelinta kindergartenka. Kuwaas waxaa ka mid ah: sida lagu ogaado degmada uu cunugaagu ka dhigan doono kindergartenka, waxyaabaha ka caawini kara howsha diiwaangelinta, waqtiyada muhiimka iyo manafacaadka haddii aad tahay hayada la shaqeeysa qoysaska.
Halkee la tagaa, yaa lala hadla: Macluumaadka Dugsi Degmeedka
La shaqeeynta qoysaska: Khayraadka ku Saleeysan Ururada Bulshada
Tusmayaasha xaga midig waxay sidoo kale bixiyaan macluumaad la mid ah oo ku qoran luqado badan, oo ku xidha hayraafacaadka kale ee ka caawin kara qoysaska ama iskaashiga bulshada.
Haddii aad garanayso degmo dugsiyeedkaaga ama dugsiga deriskaada, wac ama booqo si aad howsha u biloowdo. Haddii aanad garanay dugsigaaga ama degmadaada, wax dhibaato ah ma laha! Halkan riix si aad u hesho macluumaadka aad u baahan tahahy Si aad u billwdo! Shaqaalahu waxay aad ugu faraxsan yihiin inay ku caawiyaan xataa haddii aadan hubin inaad weli sii degenaanayso deriska marka uu dugsigu biloowdo dayrta.
Ku soo dhawoow Kindergartenka!